Madaxweyne Xasan Sheekh oo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qeybgalay shirweynaha IGAD – idalenews.com
Madaxweyne Xasan Sheekh oo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qeybgalay shirweynaha IGAD
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka soo qeybgalay kulanka ay lahaayeen madaxda wadamada ku bahoobay ururka IGAD ee ka dhacay magaalada Addis-Ababa ee dalka Ethiopia.
Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa garoonka diyaarada Aadan Cadde waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha Baarlamanka, Wasiiro Xildhibaano iyo iyo saraakiil ka tirsan ciidamada, isagoo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida.
Soo dhoweynta madaxweynaha ayaa waxaa ka qeybgalay wasiirka Wasiirka Warfaafinta Boostada Isgaarsiinta iyo Gaadiidka waxana uu wasiirku guddoonsiiyay madaxweynaha warqad soo martay boostada oo loo soo diray.
Dalka Soomaaliya ayaysan ka jirin 22kii sano ee la soo dhaafay boosto toos ah oo ay dowladu maamusho hase ahaatee waxaa ay dowlada federalka haatan qorsheynaysaa in ay dib u bilowdo boostadii caadiga ahayd ee dadku warqadaha isugu diri jireen inkastoo haatan aalada Internetka ah adduunka uu fududeeyay sida warqadaha la isugu diro.
Shirweynihii ka dhacay magaalada Addis-Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxaa loogaga hadlay arrimo quseeya dalka Soomaaliya waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ka hadlaya qodobadii lagu heshiiyay.
Tarsan oo shir caalami ka jeediyay Taariikhda Muqdisho & Heerka Maanta (SAWIRRO+VIDEO)
Ciidamada dowlada oo la wareegay degmada Tayeglow iyo deegaano ka tirsan gobolka Bakool